यी ४ महिनामा जन्मिएका महिला माता लक्ष्मीका प्रिय हुन्छन् , तपाईको कुन महिना ? « गोर्खाली खबर डटकम
यी ४ महिनामा जन्मिएका महिला माता लक्ष्मीका प्रिय हुन्छन् , तपाईको कुन महिना ?
२०७७ असोज ८ गते बिहिवार प्रकाशित
काठमाडौँ । जन्म महिना, दिन, गते, बार, समयले व्यक्तिको भविष्यमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । जबकी कोही व्यक्ति यति भाग्यमानी हुन्छन् उनीहरुले हरेक कार्यमा सफलता हाँसिल गर्न सफल भएका हुन्छन् ।
हिन्दु परम्पराअनुसार महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा लिने प्रचलन रहेको छ । लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनेर पुजा गर्ने गरिन्छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई चार महिनामा जन्मिएका महिलाहरुको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । जसलाई लक्ष्मीको रुपमा लिइन्छ ।
फेब्रुअरी महिना :यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु निकै बुद्धिमानी हुने गर्छन् । ग्रह चालको कारण यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु विवाहपछि पनि भाग्य निकै चम्कन्छ । त्यसकारण फेब्रुअरी महिनामा जन्मने महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा लिने गरिन्छ ।
अप्रिल महिना :यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु छिट्टै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने गर्छन् । सधै भाग्यले साथ दिने भएकाले उनीहरु प्रगतिको पथमा हुने गर्छन् । विवापछि पनि उनीहरुको कारण पतिलाई शुभ नै शुभ हुनेछ ।
जुन महिना :जुन महिनामा जन्मेका महिलालाई शास्त्रले खासै राम्रो नमानेपनि उनीहरुलाई भाग्यले सधै साथ दिएको हुन्छ । उनीहरु जुझारु र कर्मठ हुने भएकाले मेहनतलाई खेर जान दिँदैनन् । त्यसकारण यो महिनामा जन्मिने महिलालाई भाग्यले सधै साथ दिन्छ ।
सेप्टेम्बर महिना :यो महिनामा जन्मने महिलाहरु मेहनत नगरेपनि सजिलै सफलता पाउन सक्छन् । उनीहरुले विवाहको लागि पनि धनि केटा भेट्छन् ।
वलिउड एक्ट्रेस श्रद्धा कपुरले घरमा छिरेको गोरिल्लासँग गरी मस्त डान्स !!
घुँडामा समस्या भएका व्यक्तिले गर्दै नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र हुन्छ हड्डि खप्टिने जोखिम
बाउको मात्र हैन बाजेको बिबाह देखियो : अवध नारायणले ३५ बर्ष कान्छिसँग धुमधाम बिबाह गरे !